२०७६ कार्तिक २३ शनिबार ११:५८:०० मा प्रकाशित
संसारभर आफ्नो साम्राज्य जन्माउँदै हिँडेका अंग्रेजले सिन्धुलीगढीमा पहिलो पटक गोर्खाली सेनासँगै हार बेहोर्नु परेको थियो । सोही कारण नेपालीको शीर सधैं उच्च छ । र, नेपालले आजसम्म स्वाभिमानी राष्ट्रका रुपमा यस क्षेत्रमा आफूलाई चिनाउँदै आएको छ । सिन्धुलीगढीमा नेपाली सेनाले प्राप्त गरेको सफलताकै कारण नेपालले विश्व इतिहासमा सुनौलो अक्षर कोर्न सफल भएको छ ।सिन्धुलीगढीमा हाम्रा पुर्खाले देखाएकाे बहादुरीकै कारण नेपालले कहिल्यै कसैको औपनिवेशिक राष्ट्र बन्नु परेन । जसले नेपालीलाई संसारभर बीर गोर्खालीको पहिचान दिलायो । गाेर्खा एउटा ब्राण्ड बन्याे ।
इतिहासकारहरूको अध्ययन अनुसन्धान अनुसार त्यसबेला हाम्रा पु्र्खाले बल, वुद्धि र विकेकले सिन्धुलीगढी युद्ध नजितेको भए नेपालको एकीकरण असम्भवप्रायः थियो । हामी अंग्रेजहरूको उपनिवेशमा बस्नुपथ्र्यो। र, अहिलेकाे नेपालजस्ताे अविभाज्य राष्ट्रका रुपमा रहन्थ्यो कि रहँदैनथ्यो भनेर यसै भन्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालको इतिहासमा सिधुलीगढीलाई राष्ट्रिकै गौरवपूर्ण स्थलका रूपमा मान्न सकिन्छ ।
ऐतिहासिक किल्ला गाैरवपूर्पण इतिहास हेर्न, बुझ्न चाहनेहरूका लागि पर्यटकीय केन्द्र अवश्य पनि हो । जापान सरकारको सहयोगमा पूर्वी नेपाललाई जोड्ने बीपी राजमार्ग सिन्धुलीगढीबाटै निर्माण भएपछि यसको आकर्षण थप बढेको छ । स्वदेशीमात्र नभइ विदेशी पर्यटकले पनि सिन्धुलीगढीको ऐतिहासिकता तथा किँवदन्तीजस्तै लाग्ने मौलिक युद्धका विषयमा बुझ् चाहेका छन् र यसबाट त्यस क्षेत्रको पर्यटकीय महत्व थप बढेको छ । तर, पछिल्लो समय सिन्धुलीगढीमा पर्यटकीय विकासको नाममा जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण सुरु हुँदा त्यसले यस गढीको मौलिक अस्तित्व नै समाप्त पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता सबैमा बढेको छ ।
२०५२ साल फागुन १ गते रोल्पा, गाेरखा र सिन्धुलीगढीमा रहेको प्रहरी चौकीमा एकसाथ आक्रमण गरेर तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धको सुरुवात गर्याे । उक्त जनयुद्धमा १७ हजारभन्दा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएको सत्य खोज्न अहिलेको पुस्ताले कुनै इतिहासको पाना पल्टाइरहनु पर्दैन । नेपालको इतिहासमा एउटा नमेटिने घटना हो माओवादी जनयुद्ध । जनयुद्ध सुरु हुँदा आक्रमण भएको सिन्धुलीगढीको प्रहरी चौकी पछिसम्म भग्नावषेशका रूपमा थियो । उक्त प्रहरी चौकी माओवादी जनयुद्धको संग्रहालय र युद्धको एउटा जीवित दस्तावेज बन्न सक्थ्यो । तर चौकी रहेको उक्त स्थानमा २ वर्ष अगाडि सिन्धुलीगढी स्मारक खडा गरिएको छ । चौकीको अस्तित्व अहिले देख्न सकिँदैन । अझ विडम्बना के छ भने त्यस बेला पृथ्वीनारायण शाहको छोरा रणबहादुर शाहले गढीको पुनर्निर्माण गरेर लेखिएको शिलालेख गढीको एउटा कुनामा फालिएको छ, अरू थुप्रै शिलालेख संरक्षणकाे अभावमा मासिएका छन् । यद्यपि, सिन्धुलीगढी स्मारक बनाउने नाममा मेयर, गणपति र कर्णेलका नाम उल्लेख गरेर नयाँ शिलालेख खडा गरिएको छ । जसले गर्दा पुराना इतिहास मेटेर नयाँ इतिहास खडा गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ । स्थानीय आफ्नो धरोहर मेटिँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बसिरहन विवश छन् । गढीमा यस्ता अरू कति पुराना ऐतिहासिक संरचनाको अस्तित्व मेटिएको छ, त्यसको थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले सिन्धुलीगढीको गुरुयोजना बनाएर कमालामाइ नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । बाहिर सार्वजनिक गरिएको गुरुयोजनाको एउटा एनिमेटड भिडियो हेर्दा आकर्षक त देखियो तर सिन्धुलीगढीका संरचनालाई त्यसरी बिगार्ने हो भने गढीको अस्तित्व के रहला भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ । उक्त गुरुयोजनामा गढीलाइ डोमले छोपिएको छ । खुल्ला रुपमा रहेको टुँडिखेलमा हेलिप्याड र विभिन्न संरचना बनाउने प्रस्ताव गरेर गरिएको छ भने घरवासको नाममा रिसोर्टको परिकल्पना गरिएको छ । त्यही योजनाअनुसार अहिले कमलामाई नगरपालिकाले सिन्धुलीगढी क्षेत्रमा रोसोर्ट बनाउन आशयपत्र माग गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले बनाएको सिन्धुलीगढी गुरुयोजना पुरातत्वको सहकार्यमा बनाएजस्तो देखिँदैन । यदि पुरातत्वको सहमतिमा त्यस्तो गुरुयोजना बनेको हो भने पनि पुरातत्वले पुरातात्विक मर्यादा कायम राख्न सकेन । पुर्खाले छोडेको ऐतिहासिक भूमि सिन्धुलीगढी पूर्ण रूपमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने मनसाय देखिँदा गढीको मौलिक अस्तित्व यसरी सकिँदै छ ।
जथाभावी निर्माण हुँदै भौतिक संरचना
नेपाली सेनाले सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालय बनाउन एकतले ट्रस भवनको डिजाइन सार्वजनिक गरेको छ । झण्डै ४ करोड रूपैयाँ लागतमा भन्ने उक्त संग्राहलय यही कात्तिक २४ गते शिलान्यास हुँदैछ । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले भने पुरातत्व विभागले तयार गरे डिजाइनमा सिन्धुलीगढीमा रहेको राणाकालीन दरबारको पुनर्निर्माण गर्न टेन्डर गर्ने अन्तिम चरणमा छ । दरबार पनि त्यही दिन शिलान्यास गरिँदैछ । जसको लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । १४ ढोका र ५६ झ्याल भएको उक्त विशाल दरबार पुनर्निर्माण भइसकेपछि के गर्ने त्यसलाइ कसरी उपयाेगमा ल्याउने ? उक्त दरबारमा संग्रहालय स्थापना गर्दा हुँदैनथ्यो ? दरबार अहिले बन्ने संग्रहालयभन्दा दोब्बर ठूलो र २ तलाको हुनेछ । तर, गढीमा नयाँ भौतिक संरचना निर्माणको प्रतिस्पर्धाले यसरी कुरुप बनाइँदै छ । एकदेखि अर्को सरकारी निकायबीच नै समन्वय छैन । गढीमा धेरैभन्दा धेरै संरचना बनाउने, उद्घाटन गर्ने र शिलालेखमा आफ्नो नाम राख्ने होडबाजी चलेको छ । जसबाट पुरातात्विक मर्यादामा भने चोट पुगेको छ ।
विभिन्न सरोकार निकायको सक्रियतामा २०७६ सालदेखि हरेक वर्षको कात्तिक २४ गते अग्रेजसँग युद्ध जितेको अवसरमा विजय दिवस मनाउने गरिएको छ । गढीको प्रचारप्रसार र इतिहासको सम्मानमा यो प्रशंशनीय कार्य हो । तर सिन्धुलीगढीमा युद्धको मिति यकिन गर्न अध्ययन र छलफल हुँदा असोज १५ गते विजय हासिल गरेकाे तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ । गढीको युद्ध सम्बन्धमा समृद सिन्धुली अभियानले पर्यटन बोर्डको हलमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा इतिहासविद् प्राध्यापक दिनेशराज पन्त र नेपाली सेनाका पूर्व महासेनानी एवं गढी तथा किल्लामा विद्याबारिधि गरेका डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले सिन्धुलीगढीम अंग्रेजलाइ गाेर्खाली सेनाले असाेज १५ गते नै परास्त गरेको पुष्टि गरेका छन् । कमलामाई नगरपालिकाले २ वर्ष अगाडि स्थापना गरेको स्मारकमा समेत असोज १५ मै विजय भएको लेखिएको छ । इतिहासको तथ्य बाहिर आइसक्दा समेत कात्तिक २४ गते नै विजय दिवस मनाइरहँदा त्यसले इतिहास तोडमोड हुने चिन्ता बढेकाे छ ।
यस्ता ऐतिहासिक धरोहर र सम्पदाको संरण गर्ने दायित्व पुरातत्व विभागको हो । तर विभागले यसमा खासै चासो र सक्रियता देखाएको देखिँदैन । कतिपय ऐतिहासिक स्थलमा ऐतिहासिक मर्यादा विपरीतको पुनर्निर्माणमा पुरातत्वको समन्वय भइरहेको उदाहरण हामीसामु छ । जस्तै, रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर मल्लकालमा तत्कालीन कलाअनुसार ग्रन्थकुट शैलीमा निर्माण भएको थियो । पछि पुनर्निर्माण हुँदै जाँदा मन्दिरको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गयाे । २०७२ को भूकम्पले ध्वस्त भएको उक्त मन्दिरको पुनर्निर्माण पुरातत्वले राणाकालीन गुम्बज शैलीमा निर्माण गर्ने अडान राखेको थियो । तर नागरिकस्तरबाट निरन्तर खबरदारी भएपछि मात्र पुरातत्व पछि हट्यो । अहिले रानीपोखरीको बालागोपालेश्वर मन्दिर मल्लकालीन ग्रन्थकुट शैलीमा पुनर्निर्माण हुँदैछ ।